आँचलको विहेमा पल शाह दु’खी ? – " सुलभ खबर "
आँचलको विहेमा पल शाह दु’खी ?
काठमाडौं । चर्चित नायिका आँचल शर्मा विवाह ब न्ध नमा बाँ धि एकी छिन् । पेशाले चिकित्सक रहेका डा। उदिप श्रेष्ठसँगको करिब दुई वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई उनले वैवाहिक जीवनमा परिणत गरेकी छिन् । काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठस्थित् पार्क भिलेज रिसोर्टमा भव्य समारोहका बीच उनीहरुको विवाह भएको हो ।
निकै ता म झा म गरेर विवाह गरिएको थियो । आँचललाई उनका पतिले करोडौंका गरगहनासमेत उपहार दिएकोबारे अहिले ईण्डष्ट्री ता तेको छ । कतिसम्म भने उक्त विवाह समारोहमा सरिक भएकाहरु नै ता म झा म देखेर छ क्क परेका थिए । चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ४’बाट चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी यी सुन्दरी म्यूजिक भिडियोको दुनियाँमा अझ बढी सफल मानिन्छिन् । आँचल र उदिपले आज आयोजना गरेको रात्री भोजमा भिआईपीदेखि चलचित्रकर्मीहरु निम्ता गरेका छन् ।
बिहिबार काठमाण्डौको एक होटलमा बिबाह गरेका नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठले काठमाण्डौको पाँच तारे होटल हायातमा भव्य पार्टीको आयोजना गरेका छन् । आदिप जोडीको पार्टीमा नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो । हायात होटलमा उदिप र आँचलको प्रवेश विशेष रहन पुग्यो । उनीहरु, त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टरमा पुगेका थिए ।
हेलिकप्टर चार्टर गरेर उदिपर आँचल पुग्दा माहोल विशेष बनेको थियो । संभवत, कुनै कलाकारको बिहे पार्टीमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुगेको यो पहिलो पटक हुनसक्छ ।हेलिकप्टरबाट झर्दै गर्दा उदिपले आँचलको हात समातेका थिए । निकै नै आकर्षक र भारी लेहेङ्गा लगाएका कारण पनि आँचललाई हिड्न केही स म स्या भएको थियो । तर, उदिपले उनलाई सहज बनाइदिए । उदिप र आँचलले करिब १ बर्ष प्रेम सम्बन्धमा रहेर बिहे गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरसको स न्त्रा स का कारण सरकारले पनि अहिले कुनै ठूलो संख्यामा सभा, भोज, भतेरको आयोजना नगर्न भनेको छ । त्यस्तै आँचल विवाह ब न्धन मा बाँ धि एपछि उनको नाम नायक पल शाहसँग जोडेर धो का दिएको भन्दै पलका फ्यानहरुले गा ली समेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारे च र्को ब हस भैरहेको छ । कतिसम्म भने विवाह ब न्ध नमा बाँ धिए लगत्तै आँचलले पललाई सामाजिक सञ्जालबाट समेत अनफलो गरेका समाचार बाहिर आएका छन् ।
लामो समयसम्म फिल्म जगतमा पल शाह र आँचल शर्मा प्रेममा रहेको चर्चा चलिरह्यो । यो जोडीलाई दर्शकले रुचाए । म्युजिक भिडियोमा हिट भए पनि पल र आँचलले एकसाथ अभिनय गरेका फिल्मले भने खासै व्यापार गर्न सकेनन् ।
यी दुईको भेट ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ को अडिसनका क्रममा भएको थियो । फिल्म वृत्तमा चर्चा चलिरह्यो, पल र आँचल प्रेममा छन् । फ्यानलाई पनि यही लागेको थियो । तर, यी दुईले आफ्नो प्रेमको हल्लाबारे कहिल्यै स्वीकार गरेनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा इन्स्टाग्राममा पलले आँचल फलो गरेका थिए । आँचलको इङ्गेजमेन्टको समयसम्म पनि यी दुईले एकले अर्कालाई फलो गरेका थिए । रमाइलो कुरा त पलले जम्मा १० जनालाई फलो गरेका थिए । तीमध्ये एक थिइन् आँचल शर्मा ।
पलले मात्र आँचललाई अनफलो गरेका होइनन् । आँचलले पनि पललाई अनफलो गरेकी छिन् । जबकि, आँचलले पललाई फिल्म क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो साथी भएको भन्दै तारिफ गर्दै आएकी थिइन् । पछिल्लो समय आँचल शर्मा र पल शाहले पनि एकसाथ काम पनि गरेका छैनन् । किन एकले अर्कालाई अनफलो गर्न बाध्य भए, त्यो त समयसँगै खुल्दै जाला ।
हुन त आँचलले पलशसँग चलचित्र र धेरै म्युजिक भिडियामा संगै काम गरेकै आधारमा फ्यानहरुले उनीहरुका बीचमा प्रेम सम्बन्ध थियो भनेर अनुमान गरेको तर बास्तविकमा उनीहरुबीच कुनै प्रेम सम्बन्ध नभएको बताईन्छ । स्वयम, आँचलले समेत यो कुरा स्पष्ट पारिसकेकी छिन् । कति पायले सामाजिक संजालमा आंचलको बिहे हुँदा पल साह दु खि भएका छन् भन्ने आुंकलन गर्दै कमेन्ट पनि गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै कुनै समय डाक्टर र नेवारसंग बिहे गर्दिन भनेकी आंचलले अतः नेवार अनि डाक्टरसंगै बिहे गर्न पुगेकी छन् । आँचलको अगाडिको बाटो कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् त उदिप, भन्छन्–‘यो सबै उनको हातमा छ । उनको करिअर चलचित्र क्षेत्रमा नै अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु । उनले अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइरहेकी छिन् । उनलाई जे इच्छा लाग्छ, त्यही गरुन् भन्ने मेरो चाहना छ ।’ त्यस्तै उदिप आँचललाई ह नि मुनका लागि विशेष ठाउँमा लैजान चाहन्छन् । तर, उनले यो कुरा कसैलाई पनि भनेका छैनन् ।
उदिपलाई धन्यवाद दिदै आँचलले भनिन्–‘मैले अहिलेसम्म उहाँलाई कुनै पनि कुरामा धन्यवाद भन्न पाएकी छैन । यो बिहे भव्य बनाउन उहाँले हरेक कोणबाट मिहिनेत गर्नुभएको छ । मैले सोचेको भन्दा पनि बढी खुशी उहाँले मलाई दिनुभएको छ ।’उदिपसँग औठी साटेसँगै नयाँ खालको अनुभव आएको आँचलले भनिन् । उनले भनिन्–‘मलाई त सुरुमा ड र पनि लागेको थियो । इन्गेजमेन्टका लागि तयार हुँदै गर्दा आँखाबाट आँ शु पनि आयो ।’